Soo Xero galintii Ambassador Cawil iyo Xakameyntii Muuse Biixi: “Shirkii Safiirada Soomaaliland” Bahda Mareegta Farshaxan. |
Soo Xero galintii Ambassador Cawil iyo Xakameyntii Muuse Biixi: “Shirkii Safiirada Soomaaliland” Bahda Mareegta Farshaxan.
Maansooy duciyo kheyr, Ninka kugu dareershiyo,
Dabka ruuxa kugu shiday, Ninba doorku kula rabay,
Dareenkiisa kugu mari, Boodhari dabuubtuu,
Ku dardaarmayuu yidhi, Waa dhaxal dadweynaha,
Diiwaanka ugu yaal, Waana lagaga daydaa,
Anna kuma dayacayee, Dunidaan ku barayaa,
Waxan dooday kugu shubi, Dhegihii dalooloo,
Waxa lagugu daabici, Dugsiyada tacliintoo,
Goobaha dalxiiskaa, Lagaa daawan doonaa,
DIRSOOC, Ibraahin Sheekh Saleebaan -Gadhle -(IHUN)
Mudadii Diisamber 12-14, 2015 ayaa shir lagu qabtey magaalada Hargeysa. Shirkan waxaa la isku keenay sida la sheegay safiirada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibada. Dadka siyaasada faaleeyaa waxay soo jeedin lahaayeen in shirkan inta aan la qaban ay haboonaan laheyd in la qabto shir la iskugu keeno dadka hore u soo qabtey xilka wasiirnimada arimaha dibada, dadka aqoonta u leh arimaha dibada, iyo dadka wax ka odhan kara aqoonraadiska. Taasi marna may dhicin oo dalka Soomaaliland wali muu soo marin madaxweyne xilka aqoonsi raadinta u heelan, una hawlgali karaa. Haddii laga tagi waayo waxaa ugu dhawaa mudane Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal,halka aanu yareysan mudane Daahir Riyaalena.
Shirkani kol hadduu ahaa kii ugu horeeyey ee qaabkaasoo kale u dhaca ayaa kolay loo tirinayaa inuu ahaa guul hor leh oo uu Mudane Dr.Sacad Cali Shire soo bandhigay. Hase yeeshee dadka faaleeya siyaasada, sidoo kale Dr. Sacad Cali Shirena aqoon dheerad ah u leh ayaa falalka si kale u arka.
Dr.Sacad Cali Shire ayaa markuu ahaa wasiirka qorshaynta waxaa xidhiidh la soo samaysay hay’adda UNFPA. Waxay hay’adani oo ogolaansho ka haysatey Dawlada Federaalka ee Soomaaliya u sheegtay Dr. Sacad inay doonayaan in ay tirokoob ku sameeyaan 18kii gobol ee dalkii la isku odhan jiray Jamhuuriyada Dimuqraadiga Soomaaliya. Hay’adani waxay amarka ka qaadaneysay wasaarada qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Dawlada Federaalka ee Soomaaliya, waxaaney la shaqeynaysay siday hadalka u dhigeen maamulka qorshaynta ee dawlad goboleedyada. Waa halka uu Dr.Sacad ka soo galay qorshahaa loo maleegay.
Soomaaliland midab doorsantay-baan meeday leeyahaye
Noloshuba macaan maleh haddanad magac ka reebayne
Maansadii Mugdi, Axmed Ismaaciil Qaasim(IHUN)
Dr. Sacad muu odhan dalkaasi ma jiro iminka, annagana waxaa lana yidhaa Jamhuuriyad Soomaaliland ee wuu soo dhaweeyey codsigaasi. Markii la waydiiyey sababta uu u soo dhaweeyeyna wuxuu sheegay “ Hay’adan iyo dawlada Federaalku tirokoobka siday doonaan ha u isticmaalaan, innaguna tirokoobka dalkeena ayeynu u isticmaali”.
Waa hadal wanaagsan oo si niyadsan ah loo yidhi, hase yeeshee ka fog korniin siyaasadeed iyo aragti dheeri wax lagu hagi karo. Dadkii reer Soomaaliland ayey tani argagax ku noqotay
Tirokoobkaasi wuxuu socday muddo dhan laba gu’, waxaana la soo gabagabeeyey bishii Maayo 26dii, 2005kii laguna soo bandhigay magaalada Muqdisho. Dhacdadaa foosha xun la isma waydiin, taariihduse way qoraysaa.Waana guuldarooyinka siyaasadeed ee loo tiriyo dawlada Kulmiye hogaanka ka yahay,igmadeyna dadka uu ka mid yahay Dr. Sacad Cali Shire.
“Laba daan dhexdood iyo, Dalqo bahal qof galayoo,
Dirqi iyo tu fool adag, Dibadda ugu soo baxay,
Halkii shalayto lagu dilay, Ma dareemi waayee,
Durba miyaa illoowdeen, Dunideennii dhacantiyo,
In uu deynkii maqan yahay, Durba miyaa illoowdeen,
Nimcadii dalku lahaa,’ Kuwuu daajinaayiyo,
Kuwii deyro laga dhigay, Durba miyaa illoowdeen,
Xeerkii dalka u yiil, Kuwii uu deldelay iyo,
Kuwuu daaya odhan jiray
Maansada Dirsooc, Ibraahin
Si kastaba ha ahaatee shirkan safiirada ayaan la sii shaacin magacda dadka martiqaadka loogu fidiyey. Waxaase dadku ku war heleen inuu ka mid yahay dadkaasi mudane Cawil Cali Ducaale. Mudanahani in badan ayuu ka hawlgali jiray safaaradii dawladii Ina Siyaad Bare ku laheyd magaalada Nayroobi oo uu iminkana degan yahay. Ka soo qayb galkiisa lama dhibsan ee waxaa markiiba dadka indheergaradka ah isku qaban waayey mudane Axmed Siilaanyo ayaa ogolaadey inuu Cawil ka mid noqdo martida shirkaasi iyo mudane Cawil ayaa ogolaadey martqaadkaasi. Waa laba tagoogood oon qof indheergarad ahi ama aqoon dheeraad ah u leh labada mudane aanu wali isa saarin. Markaa waxaa la raadiyey siyaasada kulmisay labadoodu maxay tahay?…. Maxaase keenay in dad kale oo aqoon u lahaa siyaasada arimaha dibada la soo martiqaadi waayo?
Dadka aan la martiqaadin ee wax ku darsan lahaa waxaa ka mid ah:
1- Wasiirkii hore ee Arimaha dibada mudane Maxamed Siciid Gees (Wax wuu ka qori karaa)
2- Wasiirkii hore ee Arimaha dibada mudane Cabdilaahi Maxamed Ducaale
3- Wasiirkii hore ee Arimaha dibada mudane Maxamed Cabdilaahi Cumar
4- Xog-ogaal aqoon badan u leh arimaha dibada Cabdilaahi Aadan Koongo
5- Xog-ogaal aqoonyahan Dr. Xuseen Cabdliaahi Bulxan
6- Iyo mudanayaal kale oo badan………………..
Markii martiqaadkaa dhinac kasta loo dhigay ayaa waxaa dib loo jaleecay taariikhda. Waxaana dareenku la soo booday dhacdadii xil ka qaadista Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo ee 1989kii. Waxaa kaloo maanka dhex mushaaxey siduu Mudane Axmed Siilaanyo ugu hawlgaley kor u qaadidii dagaalkii ka dhex dhashay mudane Maxamed Xaashi Cilmi iyo mudane Ibraahim Maygaag Samater(IHUN). Dadkii xilligaa joogay ayaa aad uga dharagsanaa siduu mudane Siilaanyo u garab istaagey Maxamed Xaashi Cilmi, uuna Maxamed Xaashi Moodayey inuu gacanta ku haysto codka Mudane Axmed Siilaanyo. Hase yeeshee maalintii cod bixintu soo dhawaatey ayaa la arkey dhaqdhaqaaq hor leh oo lid ku ah Maxamed Xaashi uuna hogaaminayo Axmed Siilaanyo. Waxay noqotay dhacdo aanu Maxamed Xaashi waxba ka baran. Hase yeeshee maalintaasiba waxay ku xardhan tahay taariikhda bulshada reer Soomaaliland. Isha Cali ninkii dayey waano way ugu filan tahay………Waa halkuu Ibraahin Gadhle(IHUN) ka yidhi:
“Nin ku dagay markii hore, Oo ku dilay markii xigay,
Ka-digtoonidiisay, Dooddani ku faraysaa,”
Dadka siyaasada indha-indheeya aqoon wanaagsana u leh labada mudane ee Cawil iyo Siilaanyo ayaa martqaadkan u dhigay dagaal hor leh oo lagu qaadey mudane Muuse Biixi . Waxaa markii hore lala yaabanaa Mudane Axmed Siilaanyaa ayaa taageero laxaad leh u fidiyey Muuse Biixi, waxaa iminka la sugaa taageeradaasi halka ay gaadhsiisan tahay iyo kaalinta uu Cawil ka qaato guuldarada Muuse Biixi.
Lagu beeray dhiiggiyo
Dhirta maw abtiriyaa
Dhaqankeedu kala yahay?
Mise wuxuu ka dhigan yahay
Habartii mar dhooftee
Doonnidu la dhacantee
Dhawawalan ka qaaddee
Ka dib dhawr ayaamood
Salka dhigatay ciiddee
Dhulow kaama kaco tidhi.
Maansadii Dhahar, Maxamed Ibraahin –Hadraawi-
Nin baa laga hayey bishuba horteyda way iman ee taariikhda ku dhiga. Ummad aan taariikhda la socon,waxna ku salayn, waxna ka baran waa hoog iyo burbur waxaa loo fishaaa……Dal iyo dad baa wax loo qaban baan sugayee, ma iyagaa isku maqan, :
Sidii bay u dooyeysantahay damashii weyneyde
Sidii bay duleedada dharli’i ugu dabjeexaane
Sidii baa du’dada aar dhiciyo dacaw u joogaaye
Sidii baa dugaag uga gurtaa daaqa xoolaha’e
Sidii bay docu aqalladii uga daloolaane
Sidii baa darroorimada iyo daad u gelayaaye
Sidii baa degmadu ceelashii ugu darleeftaaye
Sidii baa ducaaloow! biyaha loo dawariyaaye
Sidii bay u daba goosi tahay haradii Dooloode
Mudane Axmed Ismaaciil Qaasim (IHUN)
Tafatirkii Bahda Mareegta Farshaxan
Fu, aad Sheekh
Diisamber 27, 2015
Nudka mareegta :
-Qolka Kaydka Mareegta Farshaxan..
-Buugga “ DADAN- Sooyaalkii Nololeed iyo Siyaasadeed ee Axmed Maxamed Siilaanyoo”
Qolka Kaydka Mareegta Farshaxan – Wali ma soo bixin, diyaarsanse…-
Qoraalkan masuuliyadiisa iyo milgihiisaba waxa iska leh qoraaga maqaalka